Tralọ Azụmaahịa Forex - Forex Lens
Lelee, Mụta na Uru Anyị n'inlọ Ahịa Forex Anyị
Nweta nkwanye ugwu na ndị otu Pro Trader maka ihe ruru $ 65 kwa ọnwa
ege Forex Lens Na -Ikuku
FEATURED SIRIUS XM RADIO
Nweta nnweta zuru ezu maka mmiri iyi LIVE kwa ụbọchị na echiche azụmaahịa bara uru n'ime Discord na Forex Trading Room.
NKỌWA Ịzụ ahịa ndụ kwa ụbọchị
N'ime ụlọ ahịa azụmaahịa Forex anyị, ị ga-enweta ndị nyocha teknụzụ dị elu nke ga-enye gị ntuziaka ọkachamara sitere na ọzụzụ azụmaahịa dị iche iche. Anyị Smart Money Analyst iyi LIVE kwa ụbọchị n'oge nnọkọ New York, na 2-4 ugboro n'izu na nnọkọ London. Soro anyị Sava discord ka ịhụ nhazi oge kachasị emelitere maka iyi ndụ. Anyị na-anabatakwa iyi n'efu maka ụlọ ezumike n'efu na obodo Discord anyị site n'oge ruo n'oge, yabụ hụ na ị ga-eleba anya maka ndị ahụ!
Nweghi oge itinye aka na nnọkọ ahụ? Nsogbu adịghị!
A na-edekọ oge ndụ anyị niile wee mee ka ọ dị maka ndị ahịa na-atụfu nnọkọ ndụ. Ọbụna anyị na-enye nchịkọta ahịa ahịa kwa ụbọchị dị nkenke maka ndị na-ere ahịa na-enweghị oge ịbanye na steams dị ndụ.
Enwere TA ajụjụ? Akwa!
Anyị hụrụ ezigbo ajụjụ n'anya - n'ihi na nke a pụtara na ị na-amụ ihe! Nwere ike ịjụ ndị ahịa anyị ihe ọ bụla metụtara azụmahịa n'oge ndụ iyi na Discord chatrooms. Ha na-enwe ọ happyụ mgbe niile inyere gị aka na mgba gị na-alụ, na-enye gị nzaghachi na eserese gị, ma na-enye gị echiche ha maka ihe ha hụrụ na ahịa.
Forexlọ dinglọ Ahịa Forex bụ -lọ Ahịa Nzuzo maka ndị na-azụ ahịa na ọkwa niile.
Ebe anwansi mere…
Dejupụta mpempe akwụkwọ a iji bido:
Mara ndi oru nyocha anyi
Trader Institute akụzi Azụmaahịa ụlọ ọrụ usoro maka ndị ahịa na-achọ ịchọta ka mma agbanwe agbanwe n'ahịa ha. Nwere ike ịchọta ihe karịrị 100 + awa nke vidiyo ego Smart Money n'ime Tralọ Ahịa anyị. Ọ bụrụ n ’ị bụ onye na-azụ ahịa na - achọ iwere ahịa gị n’ọkwa ọzọ, ọ nweghị Mentor ka mma iji mụta ihe karịa Tralọ Ọrụ Ahịa. Ọ mekwara ọtụtụ ihu na Trading Aku Podcast.
”Ozugbo ị mụtara ka ị ga - esi soro akara nzọ nke Smart Money n’ahịa Forex, yana etu esi eji ego eme ihe, ị ga - enwe paradigm mgbanwe nke otu ị si ele Price, na otu esi azụ ahịa ahịa. ”
SD Trader bụ nke anyị Ntinye na Aju onye ahia ahia nwere ugwo onu ahia nke 2.83 na uzo ahia ya (-ahụ ebe a). N'iji ụdị azụmaahịa nke ọkọnọ na arịrịọ, SD Trader na-enwe ike idobe ihe egwu dị ntakịrị yana ụgwọ ọrụ buru ibu. Ndị otu nwere ike iji echiche azụmaahịa ya na nyocha azụmaahịa ya n'ime ụlọ ahịa yana na Discord.
Ghọọ onye ahia ahia maka obere kọfị kwa ụbọchị!
Ndị ahịa anyị na-atụ anya ihe kachasị mma n'aka anyị, anyị na-anapụta!
”Daalụ Institute Trader. You're bụ onye ahịa kachasị mma m hụtụrụla, ọ bụghị naanị n'ihi nka gị masịrị gị kama n'ihi nrara ị raara onwe gị nye ụmụ akwụkwọ gị - Onye ahia ahia (2020)
" N'ịhụ ahụmịhe n'anya na otu esi egosi ya. Ezigbo nchikota nke onyinye na ihe omuma. Na-achịkwa nke ọma. Dị ka ọrụ ahụ. Jide ya ụmụ okorobịa! ”- - Onye ahia ahia (2020)
" Kwesịrị ekwesị penny ọ bụla. Adị m ezigbo ọhụrụ maka ịzụ ahịa mgbe m sonyeere ụlọ ahịa ha. M na-ejikwa atụmatụ atụmatụ ọnụahịa maka crypto ma ọ mara mma darn dị irè. Ana m akwado nke ukwuu Forex Lens nye onye ọ bụla ịmalite ịmalite ịzụ ahịa. O yiri ka ha nwekwara ọtụtụ ihe dị elu ugbu a na ọtụtụ ezigbo ndị ahịa na esemokwu nke dị mma. Ana m ekwu na ọ bụ ọtụtụ ihe ịga nke ọma m nwere n’ebe ha nọ! ”- - Onye ahia ahia (2020)
”Enweghị m ike ịlele Forex Lens elu ezu! Ọrụ amamiihe, mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ị nweta ndụmọdụ ọkachamara! Nnukwu nyocha nke ahịa! N'ezie ọtụtụ ihe ọmụma karịa na-eso enyemaka na ndụmọdụ. Ga-akwado onye ọ bụla chọrọ ịmatakwu ihe ọmụma ma bụrụ onye ahịa na Forex. ” - Onye ahia ahia (2021)
”Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ahia kpọrọ ihe na ịzụ ahịa dị ka ndị ọkachamara, ọrụ Forex Trading a bụ maka gị! ” - Onye ahia ahia (2019)
Achọpụtara m Forex Lens a ọnwa ole na ole gara aga na ọ bụ na-enweghị ajụjụ ndị kasị mma Forex mgbaàmà ọrụ na m na hụrụ. Agbalịrị m ma eleghị anya asatọ ma ọ bụ itoolu n'ime ha ma ejirila m ezigbo $ 2000 nyochaa ọrụ dị iche iche. “ -Onye ahia ahia (2018)
Ọtụtụ oge na-ebi ndụ kwa ụbọchị na-aga ahịa na ahịa nke ụbọchị.
Azụmaahịa azụmaahịa ejiri ọnụahịa Ntinye, Nkwụsị Kwụsị, ma weghaara uru uru na ọrụ eserese na usoro iheomume.
Mkpirisi vidiyo dị mkpirikpi nke usoro ndụ ọ bụrụ na ị tufuru ya ma ọ bụ na ịnweghị oge iji lelee oge zuru ezu.
N'ime vidiyo 100 + nke ọdịnaya ahaziri iji nyere gị aka ịmụta usoro azụmaahịa anyị.
Sonye na Obodo Discord anyị
Institute Trader (Oge Nkụzi)
Mmụta Ahịa Smart Money
Atụmatụ azụmaahịa kachasị mma nke Ichimoku na Forex